The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2005 143 min Adventure, Family, Fantasy
Andrew Adamson, K.C. Hodenfield
Anna Popplewell, Georgie Henley, James Cosmo, James McAvoy, Jim Broadbent, Kiran Shah, Liam Neeson, Skandar Keynes, Tilda Swinton, William Moseley
Fantasy ရုပျရှငျတှေ ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးတှထေဲက တဈခုကို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ နာနီယာရုပျရှငျ စုစုပေါငျး ၃ ကားထှကျရှိထားပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျတှရေဲ့ မူလဝတ်ထုကိုတော့ နာမညျကြျော အင်ျဂလိပျ စာရေးဆရာကွီး C.S.Lewis ရေးသားခဲ့တာပါ။ Lewis ဟာ the lord of the rings စာအုပျတှကေို ရေးသားခဲ့သူ J.R.R.Tolkien နဲ့ မိတျဆှရေငျးဖွဈပွီး သူရေးသားခဲ့တဲ့ နာနီယာ ၇ အုပျဟာ ခတျေပွိုငျကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။ ရုပျရှငျအနနေဲ့တော့ စာအုပျ ၃ အုပျကိုပဲ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့သေးပါတယျ။
မူရငျးစာအုပျရဲ့ လှပတဲ့ စိတျကူးတှေ ခမျးနားတဲ့ ဇာတျကောငျတှနေဲ့ ကွညျနှုးဖှယျ ရှုခငျးတှကေို အကောငျးဆုံး ပုံဖျောပေးခဲ့တဲ့ ဇာတျကားတှပေါပဲ။ဇာတျလမျးအကဉျြးမှာတော့ ပီတာ၊အကျမှနျ၊ဆူဆနျ နဲ့ လူစီ ဆိုတဲ့ မောငျနှမလေးယောကျဟာ ထူးဆနျးတဲ့ ဗီရိုကွီး တဈလုံးဆီကနေ ဖွတျပွီး မှျောကမ်ဘာကွီးထဲက နာနီယာနိုငျငံထဲကို ရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကမ်ဘာရဲ့ အကွီးမွတျဆုံး မှျောဆရာကွီး အိုကျစလနျမရှိတဲ့အခြိနျမှာ နာနီယာမှာ စုနျးမကွီးတဈဦးက ကွီးစိုးနပွေီဖွဈပါတယျ။
အဲဒီကမ်ဘာမှာ တိရစ်ဆာနျတှေ ဟာ စကားပွောတတျပွီး ရတှေေ အပငျတှဟော အသကျရှိကွပါတယျ။ အဲဒီကမ်ဘာရဲ့ ရှဖွေ့ဈဟောကိနျးအရ အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့ သားသမီးတှရေောကျလာခြိနျမှာ သူတို့ကို ကယျတငျခံရပွီး ဘုရငျဘုရငျမအသဈတို့ထှကျပျေါလာမယျလို့ နာနီယာသားတှေ ယုံကွညျနကွေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မောငျနှမလေးယောကျကို အပွတျရှငျးဖို့ကွိုးစားမယျ့ စုနျးမကွီး နဲ့ သူ့ကို တျောလှနျဖို့နဲ့ ဘုရငျလောငျးတှကေို ကာကှယျဖို့ မှျောသတ်တဝါတပျကွီးနဲ့အတူ အိုကျစလနျ ပွနျလညျရောကျရှိလာခြိနျမှာ……
Fantasy ရုပ်ရှင်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နာနီယာရုပ်ရှင် စုစုပေါင်း ၃ ကားထွက်ရှိထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်တွေရဲ့ မူလဝတ္ထုကိုတော့ နာမည်ကျော် အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာကြီး C.S.Lewis ရေးသားခဲ့တာပါ။ Lewis ဟာ the lord of the rings စာအုပ်တွေကို ရေးသားခဲ့သူ J.R.R.Tolkien နဲ့ မိတ်ဆွေရင်းဖြစ်ပြီး သူရေးသားခဲ့တဲ့ နာနီယာ ၇ အုပ်ဟာ ခေတ်ပြိုင်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့တော့ စာအုပ် ၃ အုပ်ကိုပဲ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သေးပါတယ်။
မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ လှပတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ခမ်းနားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ကြည်နှုးဖွယ် ရှုခင်းတွေကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေပါပဲ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာတော့ ပီတာ၊အက်မွန်၊ဆူဆန် နဲ့ လူစီ ဆိုတဲ့ မောင်နှမလေးယောက်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ ဗီရိုကြီး တစ်လုံးဆီကနေ ဖြတ်ပြီး မှော်ကမ္ဘာကြီးထဲက နာနီယာနိုင်ငံထဲကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကမ္ဘာရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး မှော်ဆရာကြီး အိုက်စလန်မရှိတဲ့အချိန်မှာ နာနီယာမှာ စုန်းမကြီးတစ်ဦးက ကြီးစိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကမ္ဘာမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ ဟာ စကားပြောတတ်ပြီး ရေတွေ အပင်တွေဟာ အသက်ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီကမ္ဘာရဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်းအရ အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့ သားသမီးတွေရောက်လာချိန်မှာ သူတို့ကို ကယ်တင်ခံရပြီး ဘုရင်ဘုရင်မအသစ်တို့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ နာနီယာသားတွေ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောင်နှမလေးယောက်ကို အပြတ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ့် စုန်းမကြီး နဲ့ သူ့ကို တော်လှန်ဖို့နဲ့ ဘုရင်လောင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မှော်သတ္တဝါတပ်ကြီးနဲ့အတူ အိုက်စလန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်မှာ……
Andrew Adamson K.C. Hodenfield
Anna Popplewell Georgie Henley James Cosmo James McAvoy Jim Broadbent Kiran Shah Liam Neeson Skandar Keynes Tilda Swinton William Moseley
Anna Popplewell Cameron Rhodes Dawn French Elizabeth Hawthorne Georgie Henley James Cosmo James McAvoy Jim Broadbent Judy McIntosh Kiran Shah Lee Tuson Liam Neeson Mark Wells Michael Madsen Noah Huntley Patrick Kake Philip Steuer Rachael Henley Ray Winstone Rupert Everett Sim Evan-Jones Skandar Keynes Sophie Winkleman Tilda Swinton William Moseley
Option 1 yuudrive.me 677 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 677 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 677 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 677 MB SD (480p)
Option5server.mfile.cloud 1.6 GB HD (1080p)
Option6storage.msubmovie.com 1.6 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 sharer.pw 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1